Dhanka taban ee rumaysiga jacaylka dhabta ah - BBC News Somali
Weligaa asxaabtaada ma uga warantay waxyaabaha aad isku haysaan afadaada ama saygaaga, oo ma la noqotay wax aan sii ridnayn ba? Mase aragtay qof saaxiibkaa ah oo xidhiidh la yeelanaya qof ay kula tahay in aanay isku haboonayn, laakiin maalinba maalinta ka dambaysa xidhiidhkoodu sii wanaagsanaado?
Dhakhaatiirta cilmu nafsiga ayaa ogaaday laba siyaabood oo saamayn kara sida aynu xidhiidh u bilaabi karno iyo sida aan u joogtayn karro.
Midkood waxa uu qiyaasayaa heerka mudnaanta aynu siino marka ugu horraysa ee aad qof kulantaan iyo saadaasha hore ee aad ku ogaan karto inaad isku haboontihiin, halka ka kalena qiyaaso suurto galnimada uu xidhiidhkaasi ku sii jiri karo hadii ay dhibaatooyin la soo dersaan. Waxaana la yidhaahdaa aragtiyaha muuqda ee xidhiidhka. Waxa dhici karta in si gaar ah qofku isagu uga fikiro sida uu ku aqbali karo inuu jiro jacayl dhab ahi, laakiin arintaasi ma ah mid aynu si cad ugala sheekaysano dadka, ama aynu dhaadannahay marka aynu xidhiidh cusub bilaabayno.
Gabadh ina adeerkeed Kelli u bixisay iyo Jeceyl ka dhashay
Labada halbeeg waxay ina tusi karaan in ay aad suurto gal u tahay in qofku kala hadlo qofka xidhiidhku ka dhexeeyo ama ugu fiirsan karo dhaliilaha qof kale lahaan karo xataa hadiiba aanu lahayn. Kala duwanaanshaha aragtida dadka ayaa keenta in la fahmo sababaha dookha dadka kale qaarkood aynaan u fahmi karin.
Si aad hadaba aragtidan u fahamtid waxaad ka jawaabtaa suaalahan soo socda.
Qiyaasta lagu ogaan karo in qofkaasi kuu qalmo
Kaga jawaab su'aalahan soo socda inta u dhaxaysa 1-7 oo 1 ka dhigantahay aad baan u diidanahay halka 7 ka dhigantahay aad baan u ogolahay.
1- In xidhiidh jacayl guulaystaa waxay badanaa ku xidhantahay in dadku isku qalmaan iyo in kale.
2- Waxa jira qof walba qof u qalma (ama ay is qaadan karaan)
3- Dad badani marka ay is guursadaan ayaa xidhiidh qoto dheeri ka dhex abuurmaa.
4- Muhiimadda ugu weyni waxa weeyi in aniga iyo xaaskayga/saygayga aanu aad isku jeclaannaa guurka ka dib.
5- Qof aanan aad u jeclayn ma guursadeen.
6- Ma jirto aragtida ah in qof walba uu jiro qof u qalmaa.
7- Waxaan qabaa in afadayda/saygayga mustaqbalku noqon doono qofkii ugu fiicnaa een la kulmay.
8- Dadka gooba qof u qalmaa wakhtigay iska luminayaan.
9- Sababta ugu weyn ee dadka is guursadaa u kala tagaan waa in aanay marka horeba isku qalmin.
10- Xidhiidhka adag ee aad qofka yeelanaysaan marka horeba wuu jiray inta aydaan is baran ba.
Hadaba si aad natiijada u heshid, marka hore isku gee jawaabaha aad ka bixisay su'aalaha 1,2,3,4,5,6,7,8,9 iyo10. Su'aalaha 6 iyo 8 waa inaad tirada aad kaga jawaabtay midkiiba ka jartaa 8 ka dibna aad tirada kuu soo baxda u qaadataa jawaabtii aad ka bixisay. Tusaale ahaan, hadii jawaabta kuu soo baxday noqoto 6 waxaad wadartaada ku dartaa 2. Marka ay wadartaada guud kuu soo baxdo waxaad u qaybisaa 10 si ay kuugu soo baxdo celcelis ahaan aragtida aad ka qabto su'aalahaasi waxa ay tahay.
Qiyaasta lagu ogaan karo in xidhiidhkaasi sii jir karo iyo in kale.
1- In xidhiidh jacayl guulaystaa waxay ku xidhantahay hadba sida ay dadku u daryeelaan.
2- Marka la is guursado waa in xoogga la saaraa sida loo daryeelayo ee aan la eegin ma isku qalannaa.
3- Inta xidhiidhku socdo ayaa jacaylku kobcaa ama markaasuu abuurmaa.
4- Hadii dadku ilaalinayaan guur badan laguma kala tageen.
5- Sababta guur badn loogu kala tagaa waxa weeyi dadka oo aan daryeelin.
6- Inta aad qofka taqaannaa waxay ku xidhantahay mudada aad taqaanay.
7- Inta aad qofka taqaannaa waxay ku xidhantahay mudada aad taqaanay.
8- Hadii qof aanan dooran aan guursado waan ku qanci lahaa.
9- Muddo marka aad wada noolaataan uun baad baran kartaa qofka aad is doorataan.
Si aad u ogaato jawaabta aad ka bixisay su'aalahan wadarta kuu soo baxday u qaybi 9.
Suaalahan waxa laga soo dheegay suaalo cilmi baadhis ah oo ay adeegsatay Renae Franiuk oo ka tirsan jaamacadda Aurora ee gobolka Illinios, kuwaas oo qayb ka ahaa cilmi baadhis ay wadday oo ku saabsanayd aragtida qofka ee ku niyad samida iyo muddada xidhiidhkiisu jiri karo.
Hadii jawaabta kuu soo baxday ay tahay tiro badan, ha yaabin bay ku leedahay Franiuk kelidaa ma tihide. Waxa dhacda in dadku rumaystaan in xidhiidhku guulaysan karo, laakiiin waxaan aragnaa in ay u badanyihiin in sirtu tahay in ay helaan qof u qalma.
Su'aalahaa iyo daraasadihii la xidhiidhayba waxa ka soo baxay in aragtida dadku aanay is bedelin. Taas oo macnaheedu yahay qofkii rumaysan in qofkii la isku qoray ay is helayaan aanu aragtidiisa bedeli karin, waana aragti aad loo rumaysto.
Hase yeeshee sida shakhsiyadda qofku u korto oo kale ayuu xidhiidhka labada qof dhex maraana u koraa ayay tidhi Franiuk.
Labada aragtiyood ee kor lagu xusay qof keli ahi mar qudha ma wada qabi karo. " Suurto gal ma aha in aad rumaysnaato in xidhiidhka laba qof ka dhexeeyaa kobco hadii ay ku dedaalaan, isla markiibana aad qabto in qof weliba helayo qofkii loo qaddaray" ayuu yidhi Gili Freedman oo ah dhakhtar ku takhasusay cilmu nafsiga oo ka tirsan jaamacadda St Mary.
Khubaradu waxay isku raacsanyihiin in tubta jacaylka dhabta ahi aanay weligeed ahayd mid toosan , laakiin ka warqabka dareenkeenna kalgacal raadiska ah ayaa inoo sahla inaan si fudud uga gudubno caqabadaha waaweyn ee ku gudban dhabbaha caashaqa.